Thumela 10 isetha umshini we-diesel pearl millet thresher eNigeria
Ekuqaleni konyaka ka-2019, imishini yaseVictor epulazini ithumele 10 isetha umshini we-pearl millet thresher oqhutshwa yinjini yedizili eNigeria .le khasimende lakho likhona eGombe Strte ,INigeria. okusanhlamvu okuyinhloko kukhona i-pearl millet, umhlwa nombila,ngemuva kokusithumela i-imeyili futhi avakashele ifektri yethu,wanquma ukuthenga 10 isetha umshini wokubhula okusanhlamvu owenzelwa ukusebenza okuhlukahlukene ,kodwa futhi singasetshenziselwa ukubhula kwesidunu ,ukubhoboza ummbila nokubhula,ukubhula kwe-paddy.
I-Millet yinto ebalulekile yokudla yabantu abahlala ezindaweni ezomile zakwamanye amazwe amaningi, ikakhulukazi empumalanga nase maphakathi ne-Afrika, nasemazweni asenyakatho asentshonalanga ne-Afrika esentshonalanga. Ukusetshenziswa ngakunye kwenqola njengokudla kuyahlukahluka ezingxenyeni ezihlukene zomhlaba ukusetshenziswa njengokuphakeme kakhulu eNtshonalanga Afrika. Esifundeni saseSahel, EMali naseSenegal, millet yakha rally 40 amaphesenti wokudla okusanhlamvu okuphelele , ngenkathi eNiger naseNamibia eyomile kuneqile 65 amaphesenti. millet ilinganiselwa ukuthi ilanda cishe cishe 35 amaphesenti wokudla okusanhlamvu okuphelele e-Burkina Faso, IChad neGambia. Amanye amazwe ase-Afrika lapho amabele angumthombo wokudla obalulekile afaka i-Ethiopia, INigeria ne-Uganda.
Ngaphambi komthengi wethu wokuthenga amabele, ukubhula amabele kwenziwa ngesandla namafulegi epulazini lakhe. ukubhula ngesandla kwakunzima kakhulu futhi kudla isikhathi, athathe ingxenye eyodwa kwezine yabasebenzi bezolimo epulazini lakhe.Emva kwalokho usesha ku-inthanethi ,wabona ividiyo yethu esebenza ngomshini wokubhula okusanhlamvu omningi futhi wayithanda ,ngakho-ke usithumela i-imeyili futhi avakashele ifektri yethu ,bese wenza isinqumo soku-oda 10 isetha umshini wokubhula okusanhlamvu.
Umshini wokubhula okusanhlamvu owenzelwa abaningi usetshenziselwa ukubhula izinhlobo eziningi zamabele, njengemila, umunyu,ukolweni, ubhontshisi, ukolweni , ubhontshisi, i-paddy ne-oat,i-buckwheat njalo on.Grain thresher Machine ingumshini ofanele wezikhungo zocwaningo zesayensi, futhi futhi ingumsizi omuhle wabalimi ukubhula.Lomshini wokubhula wamabele ngamazinga aphezulu okukhosela nezinga eliphansi eliphuliwe, ezinganciphisa isikhathi,futhi ingonga kakhulu umsebenzi, umshini wokugaya amabele usetshenziswa kabanzi ezindaweni zasemakhaya, amathafa, amabanga aphakathi nesifunda, amagquma,eyemukelwa yiningi labasebenzisi.
I-Diesel millet thresher isebenzisa isigubhu sokubhula ngokugeleza kwe-axial nobuchwepheshe bokuhlanza i-airflow, ukuhlanza ukwahlukanisa okusanhlamvu, amakhoba, isigodi siyaqothula, utshani, Umshini wokubhula okusanhlamvu wokuqothula unokuhlukanisa okusobala, ukulahleka okuncane, inani eliphakeme lezinzuzo zonke, naphakathi kokubhula okuhlukahlukene kwezitshalo, ingatholakala ngokumane usebenzise izikrini.
Lo mshini we-millet thresher ikakhulukazi owakhiwa nge-feed hopper, isigubhu, isikrini mesh, amashalofu, njalonjalo.Uma usemsebenzini, sicela uthumele izitshalo ngokudla okufaniswa okuqhubekayo, izilimo zizabhulwa ngukuphambana, ukuthimula, ukuphahlazeka, futhi unikine phakathi kwe-rack ye-roller nezingxenye ezihlanganisiwe zesikrini, okusanhlamvu kuyokwehlukana nesiqu, bese usikhipha esikrinini, isitashi sizokhipha umsebenzi wesigubhu esiyikhulu ngasikhathi sinye.yiyinqubo yonke yomshini wokugaya amabele.
I-Millet thresher ukusebenza kwevidiyo